Indlela yokusebenzisa i-Thumbnail Ukukhethwa Ukusiza \_ Ngokudweba
Ukuzilibazisa nemisebenzi Okuyisisekelo
Indlela yokusebenzisa i-Thumbnail Ukukhethwa Kokusiza Ngokudweba
Abaculi basebenzisa kanjani Ama-Sketches
Izithombe zokudweba ziyizithombe ezisheshayo, ezifingqiwe, ngokuvamile zenziwa ngokushesha kakhulu futhi zingekho izilungiso. Ungasebenzisa noma yikuphi okuphakathi, nakuba ipeni noma ipensela evamile kakhulu. Izithombe zokudweba ngokuvamile zincane kakhulu, ngokuvamile ziyi-intshi noma ezimbili eziphezulu.
Ama-Memory Aids namaThuluzi Wokuhlela
I-sketches yezithombe ingaba usizo lwekumemori ukukusiza ukhumbule izici ezibalulekile zendaba lapho wenza amanothi womdwebo noma umdwebo.
Zisiza futhi lapho uvakashela igalari, ukukusiza ukhumbule izingcezu ezibalulekile. Abaculi basebenzisa imidwebo yesithonjana ukuze bahlele izithombe. Ungakwazi ukuzama ngokushesha ifomethi nokubunjwa, kufaka phakathi izici ezinkulu kuphela njenge-horizontal kanye nanoma yiziphi izinto ezinkulu, futhi ubona ukunyakaza nokulinganisela.
Indlela Yokudweba I-Sketch ye-Isithonjana
Cabanga ngendaba yakho noma isithombe sichithwe yonke imininingwane, ngamehlo agcwele, noma ekukhanyeni okuncane. Konke okubonayo kukhona amajamo amakhulu amakhulu neminye imigqa. Yilokho okudingayo isithonjana. Okokuqala, faka ibhokisi elibi, ezincane kodwa ngokulinganisela okufana nesithombe esiphelile kungenzeka. Bese udwebe emgqeni wezingqimba, emagqumeni, noma yikuphi okubonakalayo okukhulu noma okuyizingqimba. Uhlaka olulandelayo noma yikuphi ukubunjwa okubalulekile, bese usheshe uphonse kunoma iyiphi indawo emnyama. Azikho izindlela ezilungile noma ezingalungile. Izindlela ezehlukene zisebenzela abaculi abahlukene.
I-sketches yezithombe yindlela enhle yokuhlela ama-color scheme.
Sebenzisa amapenseli aphuziwe, amapensela anemibala, noma ama- watercolor ukwengeza izindawo ezinkulu zombala esithombeni sakho. Imibala emincane kodwa eqondile nayo ingaphawulwa, njengoba lezi zingakhanga amehlo, kodwa ungazitholi imininingwane.
Ukwenza Amanothi Nokusebenza Imidwebo
Uma usuwenzile isithonjana sesithonjana, ungase uthande ukwenza amanothi eceleni kwalo.
Uma kugalari, ungarekhoda igama lomculi nesihloko, kanye nemicabango yakho mayelana nemidwebo. Uma ukudweba ngaphandle, ungase ubhale amanothi mayelana nesimo selanga noma imibala ethile, noma wenze imidwebo eyengeziwe ukuze ubonise imininingwane encane.
Uma uhlela umdwebo, ungase ufune ukwenza umdwebo osebenzayo. Umdwebo osebenzayo uvame ukukhulula, ngezinye izikhathi ube mkhulu njengengxenye eqediwe, futhi uhlanganiswe ngokucophelela. Le ndaba ihlelwe ngaphakathi, futhi izindawo ezingaba nezinkinga zingase zenziwe ngokuningiliziwe. Yilapho ungahle uhlele khona umdwebo wakho ngaphambi kokuqala ucezu oluqediwe.
Akuyona Njalo Kuyadingeka
Njengoba kushiwo ngenhla, akuwona wonke ama-artists asebenza ngendlela efanayo, kanti abanye basebenzisa imidwebo yesithonjana kuncane kakhulu noma cha. Ukubaluleka kwezithonjana akuzona izithonjana. Yilokho izithonjana ezimelela: indlela yokuhlela okunenjongo. Futhi ukuhlela okunenjongo, hhayi indlela, ebalulekile.
Ukufunda ukudweba nokusebenzisa izithonjana kungaba yingxenye ebalulekile yokufunda izinyathelo ezisebenzela kangcono wena njengomculi lapho uhlela imicabango yakho futhi uhlela ukuthi ufuna yini uhlamvu lwakho oluqediwe lubukeke. Kodwa khumbula njalo ukuthi imidwebo yezithonjana nje iyithuluzi lokusebenzisa endleleni yokuqeda uhlamvu oluthile lwezithombe.
Abasolwandle Bangasebenzisa Le Miso Elula Yokuqopha
Craps 3-4-5 Times Izibalo
Ukuqonda izinqubo ze-PADI's Emergency Ascent Procedures
Kuyini Okushiwo I-Flat (♭)?
I-cleft ehamba phambili
Amathiphu angu-12 okudweba i-Portraits yezingane
Okushiwo (rit.) Ritardando
Idlalwa kanjani uhlelo lwe-Iron Cross Craps System
Izinga Elibi kakhulu Emlandweni Wemiqhudelwano yeMasters
I-Future Perfect (amaVenzi)
I-Essentials: Yini Okumele Uthayishe Ikholeji
Isiqephu se-Opera ka-Mozart, i-Idomeneo
Izimo ezihamba phambili zePiano Acoustics neMpilo
I-Biology Prefixes and Suffixes: -ectomy, -stomy
Uzodinga ukuqukethe "Décrire" ukuthi "Uchazwe" ngesiFulentshi
Izimpikiswano Nokulwa Kamuva High School Start Times
Izingoma ezidumile zaseBrazil
Iyini i-Fourth Estate?
Ukukhulumisana Okukhululekile: U-Tim Hanley Umlobi we- "Uphenyo Lois Lane"
Kulungile, Rite, Wright, no-Bhala
Yiziphi izizwe ezincane kunazo zonke e-United States?
Indlela Yokuzihlanganisa "I-Reconnaître" (Ukuqaphela) ngesiFulentshi
Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe 11 Greatest Superman Comics of 2000s
Isinyathelo ngesinyathelo: Amakhadi e-flash for Word Recognition of High Frequency Words
Chofoza - ukuchaza
Indlela yokufaka esikhundleni somsila we-Pickup Umsila noma isibhamu se-Brake Light
Ukuqonda iTheory Critical
Angel Jibreel (Gabriel) e-Islam
Ukuvinjelwa kweSan Antonio
Lithini IBhayibheli Ngomakhelwane?
Izinselele Izinhlangano Zase-Afrika Ezibhekene Nezimele
Iyini i-Molecule ye-Fat Saturated?
Johane 3:16 - Ivesi elidume kakhulu eBhayibhelini
Calpulli: Inhlangano Eyisisekelo Yomphakathi Wase-Aztec